I-Trump, Q-Anon kunye 'nokucoca ubunzulu beentsomi' (Robert Jensen, Janet Ossebaard): UMartin Vrijland
I-Trump, Q-Anon kunye 'nokucoca ubunzulu beentsomi' (Robert Jensen, Janet Ossebaard)
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	25 Matshi 2020	• 12 Comments
Nangona uRobert Jensen ebonakala ngathi ufulathele amaqela ezopolitiko aphakathi, usengumlandeli omkhulu kaTrump. Iividiyo zakhe ngoku zijongwa kakhulu, njengaleya yeenkwenkwezi entsha kwisiza; inenekazi elikholelwa kwii-UFOs nakwizangqa zezityalo: uJanet Ossebaard.
Ilungile yona ngokwayo into yokuba ndikholelwe kwii-UFOs okanye kwizangqa zezityalo, kodwa ngokokuchatshazelwa sisamkela icebo lokudibanisa abafuna inyaniso kwi-kolder. Nangona kunjalo, bobabini uJensen kunye no-Ossebaard bakholelwa ukuba uDonald Trump uza kusindisa umhlaba. E-Ossebaard oku ngoku kunxulumene ngokucacileyo nembali 'enzulu' kunye ne 'Q Anon'. URobert Jensen uyakuthatha kancinci, kuba uzama ukuba angazidibanisi nethiyori ythi kangangexesha elide.
Ndiza kuzama ukukucacisela ukuba kutheni ndikholelwa ukuba sithetha ngokhuseleko lwenethiwekhi apha. Andikwenzi oko ukwenza abantu bamnyama, kodwa le nto ndiyenza ukuba ndikunike umbono owahlukileyo ngalo mbandela, ukuze ubandakanyeke ekuqwalaselweni kwakho.
Athini la matyathanga okhuseleko?
I-pawns yokhuseleko ngabantu, abo, egameni le-block enye yamandla esicinga ukuba singayamkela ngasemva imithombo yeendaba, bavelele kakhulu kunakwimithombo yeendaba kwaye banamava amancinci kumajelo eendaba okanye eendaba ezentlalo. Bacinezela enye imithombo yeendaba kunxibelelwano lwabo. Iziteshi eziphambili zinika ingxelo ngazo (nokuba zimbi: yintoni enika ingqalelo ikhula). Ukongeza, mhlawumbi baxhaswa ngokuqinileyo ngenani elifanelekileyo I-IMBers nangabantu abathi bayibale nje 'ngebali elilungileyo lokuthetha', kumajelo eendaba ezentlalo.
Emva kwe-911, umzekelo, ubunomntu onjalo e-US; Umntu othe waqokelela abalandeli abaninzi ngokwazisa eminye imibono esesikweni ye-911. Nokuba ungakholelwa okanye uyakholelwa na ukuba u-911 yayingumsebenzi ongaphakathi. Lo ka-Ace Baker ukwazile ukufumana ukulandela okukhulu phakathi kwabantu abakholelwa ukuba i-911 yayingumsebenzi ongaphakathi. Wagubungela zonke iintlobo zethiyori waza watshisa ezo wayecinga ukuba ngamabali amabi. Wayenguye, ngokungathi kunjalo, ubuso 'bentshukumo yenyaniso', njengoko yabizwa njalo.
Nje ukuba abe nokulandela okukhulu, wenza into eyayingalindelekanga. Ngexesha lomdlalo werediyo, ngequbuliso waqala ngokuthetha nabazali bakhe, unkosikazi kunye nabantwana kwaye weva umpu, emva koko yathula yaze umsasazi wathi: "Ndiyathemba ukuba ayonyani le." Kungekudala kamva, kwafana no-Ace Baker obuye waphila kakhulu. Ngale ndlela waqhabalalisa ukuthembakala 'kwentshukumo yenyaniso' kwinto enye. (mamela nantsi iqhekeza)
Nangona kunjalo, kukho amacebo amaninzi ngakumbi, anjengalawo apho elinye igama elaziwayo 'kwintshukumo yinyaniso' kamva labhencwa khona njengenkokeli kwihlelo 'laBantwana bakaThixo'; ihlelo elikhuthaza ukulala ngesondo nabantwana abancinci. Kuba le Zen Gardner yakwazi ukunxibelelana nabantu abaninzi 'kwintshukumo yenyaniso', bonke abo bantu bosulelwa.
Uninzi lwee-paws zokhuseleko zisetyenziswa ziinkonzo ikakhulu ukubhengeza inyaniso ecacileyo okanye inyani ebonakalayo. Kuba batyunyuzwa kuyo yonke indawo, bafumana abalandeli abaninzi. Sibona okufanayo ngoRobert Jensen noJanet Ossebaard. Injongo yexesha elide kukuba njengenqanawa yokuloba banokutsala abantu abaninzi kangangoko kunokwenzeka kumnatha wabo wokhuseleko, kwaye emva koko bavuthele isikhephe sokuloba ngesigculelo. Oku kuqinisekisa ukuba unokubahlazisa abo bantu bagxekayo kwaye ubagcine ukusukela ngoku ukuba bahambelane neendaba eziphambili nezopolitiko.
Ukucoca indawo enzulu kunye ne-Q Anon
Bobabini uRobert Jensen noJanet Ossebaard balindele lukhulu kuDonald Trump. Iyelenqe le-Q Anon lisekwe kumntu obeka imiyalezo efihliweyo kwi-intanethi, athetha ngobunzulu bokuba uTrump wayefuna ukuhla kunye noDonald Trump olwa le nzulu. Kukho amarhe okuba uQ Anon luhlobo lwenkqubo ye-AI kwaye ndacebisa ukuba olo khetho kumanqaku adlulileyo.
IBM ye-Blue Blue supercomputer ephumeleleyo iphumelele al kwi-1996 yeentshatsheli zehlabathi uKasparov nge chess kunye nekhompyuter yeAlfum yeOfmum ka-2016 intshatsheli yehlabathi yomdlalo onzima Yiya ukubetha. Kuyacaca ukuba oorhulumente basebenzisa iikhompyuter eziphezulu kwisicwangciso sabo ngokudibana nemithombo yeendaba kunye nolunye uhlobo losasazo, zidibene nayo yonke idatha enkulu yabantu (abaqokelele ngexesha lokwenyani).
Kodwa masiyiyeke phakathi. Ngokomgaqo, singacinga ukuba oorhulumente bayazi ukuba kusoloko kukho inkcaso phakathi kwabantu. Ke ukuba banokuyakha ngokwabo inkcaso ngokwabo kwaye bathimbe isihlwele esikhulu sabantu, baya kuba baqhuba kakuhle. Q I-Anon inokuba yinxalenye yesicwangciso sobuchule bokhuseleko.
Umzekelo we-Q Anon imibono endiyifumene izolo. Konke kubonakala kunesiprofetho, ke kunika ingcinga yokuba uQ uyasebenza ngokwenene noTrump. Banokuyazi njani yonke le nto? Funda nje:
Ingcango: UGqr Russell McGregor
Ukugwetywa kwendlu yehlabathi kuya kuqhubeka de kuphele konke ngo-Epreli 10 (ngolwesiHlanu oLungileyo). Ngaphambi koko, iintsuku ezili-10 'zobumnyama' ziya kuqala ngomso umhla woku-1 ku-Epreli, kwaye ezo ntsuku ziya kuphela ngo-Epreli-10.
Ngokukhawuleza ngaphambi kokuqala 'kobumnyama', UPOTUS uza kuthumela i-Tweet nge: Abantu bam baseMelika ... iSiphepho sikufikile …………… .. (“Abantu bam baseMelika… iStrong sifikile ...)” ekuqaleni unciphise ukukhathazeka malunga nokubonakala "kobumnyama." Xa "ubumnyama" buvela, kuya kubakho isipikili kwindawo yokungena ejikeleze iCoronavirus kunye nexesha likaxakeka kwezonyango. Le meko kaxakeka yezonyango sele ibhengeziwe kwangaphambi kuka-Epreli 1 kwizixeko ezininzi (nakwilizwe. IVert.).
Uninzi lwabantu luya kube lubekwe phantsi kokubanjwa kwendlu kwaye uninzi lwakha ukutya, njl.
E-Australia, abangaphangeliyo kunye nabathathe umhlala phantsi baya kufumana i-31 yeedola ngoMatshi 750. Amanye amazwe aya kwenza amalungiselelo anjalo ukuze bambalwa abatshone yindlala. Ezinye iivenkile ezingxamisekileyo ziya kuhlala zivulekile ukuze zithengise ezona zinto ziyimfuneko, kodwa uninzi lwevenkile luya kuvalwa.
Ngeentsuku ezili-10 'zobumnyama', akukho zixhobo zentlalo okanye ze-Intanethi ezikhoyo. Kuza kubakho umbane, kodwa akukhoirediyo kunye nomabonwakude. Akukho maphephandaba aya kuprintwa. Umkhosi welizwe ngalinye uza kubavala aba bapapashi.
I-Potus iya kuba ne-KUPHELA indlela yokufikelela ebantwini kwihlabathi liphela ngeentsuku ezili-10 'zobumnyama' kwaye iya kuba kwiNkqubo yoSasazo yeNgxamiseko. Yonke imikhosi kwilizwe jikelele iyakudlulisela kwiiTV nakwizixhobo ezikumazwe abo.
I-potus iya kuba ngeentsuku "zobumnyama", nokuba phesheya, okanye kwi-Airforce One. Isizathu esaziwa ngokuba sisizathu sokusebenzisa i-Airforce One iya kuba yokhuseleko kunye / okanye umngcipheko wosulelo. Inkqubo yosasazo engxamisekileyo iza kusasazwa ukusuka kwi-Airforce One. Ke kuya kubakho ibhloko yeendaba esebenzayo, ngaphandle kwePOTUS.
Amaxwebhu enziwe ngokufanelekileyo aya kusasazwa kwihlabathi lonke kwiTV kunye nezinye izixhobo kusetyenziswa inkqubo yoSasazo olungxamisekileyo. Iziqulatho zayo ziya kucacisa zonke ezoyikiso, ulwaphulo kunye neenkcukacha zayo yonke into. Umxholo uya kuba nobuhlobo bosapho kwaye uya kuba ngaphaya kombuzo.
UPOTUS uza kucacisa ukuba wacelwa njani ngumkhosi wase-United States ukuba akhuphe i-Deep State nokuba 'akunguzo "kwezopolitiko. Uya kuqinisekisa ulwazi lwe-Q. Ezi ncwadi ziya kubonisa ukuvuma ubungqina okuvela kosopolitiki abadumileyo be-State State kunye nabantu abakhethiweyo. Ubume bolawulo lwehlabathi buya kuchazwa. Kuya kuvela ubungqina bokwaphula umthetho. Iingxelo zenkundla yomkhosi ziya kwaziswa esidlangalaleni.
Ezi nkcazo-ntetho ziya kusasazwa, yitsho iiyure eziyi-8 ngosuku, ngeentsuku ezili-10 ezizeleyo. Ukuphindaphinda kuya kwenzeka lonke usuku ukuze abo basasebenzayo kunye nabahlanguli bangaphoswa nantoni. Usasazo ke luya kuqhubeka iiyure ezingama-24 ngosuku. Iintsapho aziyi kwenza nto ngaphandle kokuzijonga. Eyona vidiyo imbi kakhulu enobungqina ayisayi kuba yeyomntu wonke, inokubukelwa ngabo bafuna emva kweentsuku ezili-10 'zobumnyama' kwi-Intanethi.
Kuya kubakho uloyiko olukhulu, ukothusa kunye nokudideka. Indima yethu njengabaxhamli behlabathi iya kuba kukubonelela ngokuzola, isiqinisekiso, ububele kunye nokuqinisekisa. Uninzi lwabantu abathanda ukuthanda ilizwe ebefudula boyika kakhulu ukuthetha.
Akunakwenzeka, kodwa kunokwenzeka, ukuba i-JFK Jr kunye nabanye baya kuba negalelo ekuthembekeni kokusebenza. Xa iintsuku ezili-10 "zobumnyama" ngolwesihlanu olungileyo ziphela, kuya kubakho ukugqabhuka okukhulu ngokomoya.
NgoLwesihlanu Olungileyo, ubuntu buya kuxelelwa ukuba intsholongwane ikhuselekile kwaye umntu angaphuma kwaye abuyele kunye. Iicawe, izindlu zesikhungu kunye neelokhemes ziya kugcwala. Kuya kubakho ukubandezeleka okukhulu, kodwa kwanokuphumla.
Ipesenti encinci, mhlawumbi i-5%, iya kuba ngaphandle kolawulo kwaye isuswe ingqondo kude kakhulu ukuba yamkele inyaniso. Njengesiqhelo, baya kubangela ukuphazamiseka.
Imeko enzulu iya kuphulukana nolawulo lwayo yonke into ngonaphakade. Umkhosi uya kubeka iliso kwizikhululo zeTV kunye nabapapashi bephephandaba ukuthintela ukonakaliswa. Emva kokumiswa, imithombo yeendaba esekwe iya kuchazwa ngokupheleleyo kwaye abayi kukwazi ukuliphikisa ibali.
Abantu base-Deep State abangazange banikezele kwaye bangagxothwa eGuantanamo Bay bayanikezela kwimpela-veki yokuzibulala nge-11 ka-Epreli ngo-12 ukuya ku-2020.
Ngoku oku kulapha ngasentla kungqinelana kakuhle nenkomfa yemihla ngemihla yeDoald Trump ebhengeze ukuba ufuna abantu baseMelika bakwazi ukuhamba ngokukhululekileyo baphinde baye ecaweni ngexesha lePasika. ishishiniinsider.com). Ke ibali le-Q Anon libonakala lilingana ngaphandle komthungo kuloo nto ithethwa nguTrump, iyenza ibe yinto ethembekileyo. Akukho mntu uyaqonda ukuba iinkonzo zilungile ngokwaneleyo ukuba zingadlala zombini iinkampu.
Yintoni ephosakeleyo ngoRobert Jensen
Awuyi kundiva ndisithi kukho into engalunganga ngoRobert Jensen njengomntu. Ndicinga ukuba usebenza njenge-pawn ye-pawn yokhuseleko kwaye njengomnxibelelanisi we-master oqeqeshiweyo uyazi ngqo indlela yokugcwalisa umnatha wokhuseleko. Isicwangciso sakhe asikokuvakalisa esidlangalaleniiyori ye-Q Anon. Nangona kunjalo, sele encoma uDonald Trump kwividiyo yakhe yokugqibela yeTrump esithi isisombululo asifanele sibe sibi kakhulu kunengxaki.
UJensen unyanzelisa ukuba amanyathelo okutshixa kwe-coronavirus agqithe kakhulu kwaye uninzi luya kuvuma naye. Ugxile kumanqanaba okusweleka kunye nobudlelwane kunye nokuzonwabisa kwelizwe liphela, kubandakanya neziphumo zoqoqosho. Ufumana le Bloomberg uxwebhu, esele ndilidibanise kwinqaku elidlulileyo. Icacisa ukuba iipesenti ezingama-99 zabantu abathe basweleka e-Itali sele benazo ezinye iimeko abanokufa kuzo.
Ngoku uza kuthi:Well kwaye? Yintoni ephosakeleyo kuloo nto? Unyanisile ngoku !?Ndicacisile apha ngasentla ukuba iminatha yokhuseleko ayithethi ubuxoki. Banokukubonisa nenyani epheleleyo. Injongo yeenethi zokhuseleko kukuba udityaniswe nomzimba othile wengcinga okanye umntu. Umntu onje kweli tyala nguDonald Trump.
Ukuba kamva iyavela into yokuba uDonald Trump akahlali ecoca yonke indawo enzulu kwaye ukuba kamva iya kulila ukuba uDonald Trump, umzekelo, wenze impazamo enkulu kakhulu ngokushiya abantu baseMelika esitratweni kwakhona ngeempelaveki zePasika (kuba ukuba, umzekelo, ubhubhani we-coronavirus ngequbuliso iphinda ivele, kodwa ke ngakumbi nangakumbi ngogonyamelo), abaxhasi bakaDonald Trump kunye noJensen babethwe kwityuwa enye yawa. Ke wonke umntu uyakucela ukuvalelwa kwabo bonke abagxeki abangavumiyo ukuyibona indlela eyingozi ngayo intsholongwane ye-corona.
Nceda uqaphele: amajelo eendaba anokwandisa ukwenzeka kwakhona, kodwa ngelo xesha awusayi kukhululeka ngokucinga ngokunzulu ngesicwangciso esiliqili sokhuseleko kunye nokuqhushumba komnatha kaRobert Jensen. Ngapha koko, 'ukucinga ngokucinga' yeyona nto iyingozi ngokwengqondo ngelo xesha.
Yintoni engalunganga ngoJanet Ossebaard
Kufuneka icace gca ukuba andikho ekuhlaseleni abantu abathile, njengoko bendisenza ngaphezulu kweminyaka emi-7. Andizithandi 'ezantsi kwebhanti'. Ndiyalumkisa malunga nesicwangciso esiya kujongwa. Inyani yokuba kukho abantu abanokusebenzela ngasese iinkonzo kwaye bazivumele ukuba basihanjiswe njengezokhuseleko zenqkuthu kukhuseleko lesazela sethu kunye neKarma.
KuJanet, kucacile ukuba uyazisa nge-Q Anon theories kwiividiyo zakhe. Ke yena ukukhuthaza ngokwenyani ukuba uhlale phantsi ulinde ubone ukuba kwenzeka ntoni. Ukuhlangulwa kukaTrump kuthiwa kusondele. Sele ndibhale ngayo Utsho en Utsho inqaku.
Yintoni esinokuyenza emva koko Kulungile kholwa, yintoni esele inomdla?
Ngokuchanekileyo loo ngcinga sisiphumo esifezekiswayo xa usiva ukuba uyaphoxeka xa ubanjelwe kumnatha wokhuseleko kwaye wonke umkhombe wabanjiswa. Kungenxa yoko le nto ndihlala ndibonisa ukuba imalunga nokuziva kwakho. Kwaye ngenye indlela apho uRobert Jensen hijacks lelo gama kulosasazo lwamva nje.
Imalunga 'nokwazi kwakho' ngombono 'wemvelaphi yobuntu bakho'
Kwincwadi yam ndithetha ngokwazisa okwenyani kwaye ndithetha ngayo yonke le ntsholongwane ebandakanya yonke into efuna ukusifumana ekubambeni kwaso. Ndichaze nobhubhani kule, njengoko sihlangabezana nayo ngoku. Okubaluleke kakhulu, nangona kunjalo, ndicacisa ukuba asinakufezekisa okuninzi kumgangatho womzimba. Ngaba ucinga ukuba ngokwenene, ukuba onke amafama aya ezitratweni okanye sonke silala phantsi, sinokutshintsha okuthile? Urhulumente sele ezibonakalise ukuba angaluvala lonke uqoqosho ngaphandle kokubakholisa.
Esinokukwenza kunye ekufuneka sikwenzile kungaphaya kokulindelweyo kwaba bathunyelwa kwamanye amazwe abasihlangulayo; Igqitha kwelokulindela into yokuba uQ Anon kunye noTrump besiza kuthi. Into esinokuyenza inkulu kakhulu! Into esinokuyenza malunga nokuqonda amandla akho endalo. Ndiyicacisa ukuba yile ncwadi. Ungayithenga loo nto. Ungayifunda mahala kumanqaku amaninzi, kodwa ngenxa yokuba usekhaya kwaye ngenxa yokuba unexesha lokufunda; kuba ungawafumana amandla akho ayinyaniso; kuba singakwazi ukoyisa uloyiko kwaye kuba sinokwazi okungaphezulu kakhulu kunokuba sicinga: ngenxa yoko kunokwenzeka ukuba ufunde esi sishwankathelo:
Qaphela: Ndigxekwe izihlandlo ezimbalwa kwezi ntsuku zidlulileyo ngokukhangela ukuthengiswa kwencwadi ukwenza imali. Le ncwadi yabhalwa ngesicelo sabafundi ukuze kuhlanganiswe amanqaku (simahla afundwe) asusela kwiminyaka yakutshanje ukuya kwinto enokufundwa ngosuku olunye.
Uludwe lwekhonkco lovimba: intamboreaderapp.com, ishishiniinsider.com, bloomberg.com
Ukuhlaziywa kwe-Coronavirus covid-19 ukuvala ukuvalwa: Xa uvuka kwaye uqaphela ukuba ubanjiwe, yintoni onokuyenza?
Nceda uqaphele: uxwebhu lweCovid-19 Janet Ossebaard (Ninefornews) ngumgibe weendaba ezingezizo
I-Coronavirus COVID-19 ubhubhane: intsholongwane, i-bioweapon okanye i-hoax yokuseta kwakhona kwemali kunye nolawulo lwamanani?
I-Bill Gates 'yenani lamachaphaza' ikhadi lesazisi engenazingcingo esigcina ujonge ukuba ingaba unayo i-coronavirus nokuba ukhe wagonywa na.
tags: Anon, nzulu, eziziimbalasane, Janet, Jensen, coca, I-Ox-iindevu, Q, Robert, ngexilongo, khu seleko, ukhuseleko lweneyile yomnatha
25 Matshi 2020 kwi-19: 30
Kubonakala ngathi ayinakwenzeka into yokuba uJensen aphakamise uMongameli waseBrazil uJair Bolsonaro kusasazo lakhe ngokuhlwanje
Qaphela ukuba le yinxalenye yesicwangciso seenkampi ezimbini kunye nomgaqo-nkqubo wokhuseleko. Ke: Abakhanyeli be-coronavirus okanye abo bathi yonke into iza kulunga kungekudala bohlwaywa ngokuqatha ngenxa yokuvuselela intsholongwane (ubuncinci obuya kubonisa imithombo yeendaba kunye nezopolitiko nzima kakhulu ngamanani). Ke bonke "abagxeki" bavuselelekile. Cinga ngeenkampu zokufunda ngokutsha, izigwebo zentolongo, njl njl.
UTrump noBolsonaro bayinxalenye yomdlalo. Ukutyhilwa kukaTrump emva kweIsta kubonakala kuyinto enokwenzeka ukuba ulindele.
25 Matshi 2020 kwi-22: 25
Ndibukele nje usasazo lwakwaJensen kunye nokujonga kwam phambili kuyinyani… (35:25 imizuzu.)
28 Matshi 2020 kwi-11: 51
Kanye njengoTrump, uBolsenaro ngoku uzibeka “njengophambili nobubi bendoda / indoda elunge kakhulu. Kulula ukuyiqonda lula into xa sele uyibona ukuba isebenza njani yonke.
UJensen ngoku uphinda ubalisa ingxelo eyahlukileyo kancinci ngokubhekisele kwezopolitiko ze-NL. Abezopolitiko balahlekisiwe kwaye baxokiswa yimithombo yeendaba ephezulu, kuba amajelo eendaba anamandla amaninzi. (ukuba awuyenzi le nto siyithethayo singenza ukuba izilwanyana zasendle ziphume phambili).
Ke ngokukaJensen thina (abaphaphileyo) kufuneka sikwenze kucace kwezopolitiko ukuba kufuneka batshintshe, ke yonke into izakulunga.
25 Matshi 2020 kwi-20: 01
Unyanisile ukuba badibanisa iinyaniso.
Ndiqinisekile ukuba yonke into yenzeka kwinqanaba lokomoya ngoku. Abantu abaninzi bayayiphosa le nto ngenxa yazo zonke izinto eziphazamisayo. Nje ukuba ukhulule emsebenzini, sangena kwi-netflix, uxinzelelo kunye neentsholongwane.
Zifihle, ukhuphe, ukhuphe, ukhuphe kwaye uye kwinqanaba eliphezulu.
25 Matshi 2020 kwi-20: 38
Yinto yonke ngamanye amaxesha ukudimazeka ngokupheleleyo. Ngaphandle kweNkosana uCharles waseNgilani ngoku une-corona (ndiyamnqwenelela kakuhle kungekudala).
Inani labantu abaziwayo abanayo i-corona kufuneka iphantse kwangoku ibe yi-1 kwi-50. Kodwa abantu bayifumana le iqhelekileyo kuba baphoselwe ekufeni kwimithombo yeendaba ngamanani (azange iingqondo zipesenti !!!) umzekelo wenani labantu kwihlabathi liphela (ngokweMSM) ekubonakala ukuba banayo. Oku kumalunga nama-400.000 ngokwe-MSM
I-98% yabantu ababonayo eli nani abayiqondi ukuba kuthetha ukuthini konke konke. Ukuba abantu abangama-400.000 kwihlabathi liphela bane-corona oku kuthetha ukuba malunga ne-1 kubantu abayi-17.000 emhlabeni ngokwenene bane-corona !!!
Ndikunye nomninawa wam kunye nabanye abambalwa abapholileyo bonwabileyo, ndenze uvavanyo oluncinci phakathi kwabantu abamalunga ne-100 abanobuncinci bemilinganiselo yobulumko, ndibabuza, phakathi kwezinye izinto:
Inani elipheleleyo losulelo lwe-corona emhlabeni ngama-400.000. Yeyiphi ipesenti yabemi behlabathi?
Impendulo ephakathi yayingu (uyakholelwa okanye hayi) ukuba abantu abangama-400.000 babephakathi kwe-1% ukuya kuthi ga kwi-10% yabemi behlabathi. Bangama-2 kuphela kwabali-100 abanike impendulo echanekileyo.
Oku kuthetha ukuba xa umDatshi ophakathi (kwaye mhlawumbi nabantu abavela kwamanye amazwe) besiva okanye bebona inani le-400.000 yosulelo lwe-corona ebhalwe kwihlabathi liphela, ucinga ukuba le yipesenti enkulu kakhulu yabantu abasehlabathini (wow sele eyi-1% okanye I-5% yabemi behlabathi bane-corona, yingozi kangakanani).
Ndikubonile oku kuvela kuJair Bolserano. Into ehlekisayo yeyokuba uPutin uvunyelwe ukukhuthaza uluvo oluchasene ngqo neRussia: U-Putin uthi kuyingozi kakhulu kwaye amaRussia kufuneka alandele ngqo imikhombandlela yeBig Brother kwaye kufuneka athobele omnye komnye (uPutin uthi malunga noRutte)
Kutheni phantse bonke abantu behlabathi belele? Babonakala ngathi banomdla kwi-Luciferian elite. Ngokuqinisekileyo umntu unokukwazi ukucinga kancinci kwaye abale ukuba akukho mntu emhlabeni unekorona? (Ngaphandle kwabantu abadumileyo, phantse wonke umntu ubonakala ene-corona).
25 Matshi 2020 kwi-21: 32
Njengoko usazi ukuba kufuneka "umamele iingcali" 😉
Ngapha koko ... amanani manani kuba amajelo eendaba nezopolitiko asixelela loo manani. Ngandlela-thile? Awazi.
Into esiyaziyo kukuba abantu bathatha isikhundla sokuba ekukhuleni okubonakalayo babona amanani amancinci ekuqaleni de ijika liphume njengedolo.
Akunamsebenzi ukugxila ebantwini ngamanani okanye kwiipesenti okanye kwiijika.
Kuyanceda ukugxila ebantwini kwinyaniso njengoko siyibona.
ellysa wabhala wathi:
26 Matshi 2020 kwi-02: 51
into endakhe ndiyazi / ndafunda kuyo "imfundo" yam ubudlelwane boluntu-kukuba amanani-okanye amanani njengoko wabizwa kakuhle - sisixhobo esifanelekileyo (iindlela) sokujikeleza. Ubudlelwane noluntu = Ukudlala / ukujikeleza abaphulaphuli Ngamanani unoku "ukunciphisa" yonke imeko nganye / imeko / umntu ngamnye ukuba athethe kwisondo. Umndilili, ususa ixabiso lomntu. Amanani yindlela yokwenza ubalo. Itekhnoloji yanamhlanje isebenzisa kuphela amanani ama-2 - i-zero kunye nelinye yokudala eyona nyaniso isasazekayo. Ukwenza ukugqume ngaphezulu.
Ngaphandle kwamathandabuzo sitsho ngamanani ukuba asenze sibe nesiyezi. Ngamanye amagama, ulahlekelwa kukuziqhelanisa. Ukuba uphulukene nekhonkco, uya kulahlekelwa yinto, oko kukuthi umxholo / isikhokelo.
Ukuba awunaso isakhelo / umxholo, uyinkcazo yokudlala ngesandla somnye umntu.
Amanani ziimpawu, indlela esezantsi yokunxibelelana (ngengqondo ephantsi). Onke la manani enyanisweni akananto, awathethi nto, kodwa kwangaxeshanye axelele yonke into kubahluzi. Sifikile ngoku ngexesha apho kungumsebenzi wethu ukugqiba ibali (ispin, isipin).
Kwakhona thelekisa amanani esiNgesi esixela ngaphezulu kunokuba unokubona ekuqaleni (ixabiso lobuso) ukrokrela. Ukuphindaphindeka Amanani / amanani asisiboniso seemvakalelo (= iimvakalelo ezisezantsi) zokwenza umsebenzi ngaphandle (ungazi) ukuqaphela ukuba awunguye umqalisi. Inkqubo yemfundo yenzelwe kanye loo nto. Amanani / amanani azisiwe kuthi kuphela kwifom enye, ifom engenanto. Yiyo loo nto kufuneka "sifunde ukubala" ukuze sinqamle kulwazi lwendalo iphela. Ngapha koko, lelinye ibali elinzulu. Ndiyathemba ukuba uya kuvuma koku kwaye ucinge ngayo.
26 Matshi 2020 kwi-07: 04
Umzekelo, ukuzisa umntu phantsi kwengxoxo ye-hypnosis (kungoko abantu bekhetha ukubukela umabonakude okanye isitishi seYouTube), kungcono ukudwelisa amanani ambalwa ngokulandelelana. Oku kunefuthe lokuphazamisa iinkqubo zakho zokucinga. Bazama, ngokungathi kunjalo, ukulandela amanani amakhulu okanye ukubala, kodwa ngenxa yokuba ingqondo yakho inengxaki "yokugcina", isithethi sidlula ukuqonda kwakho kwaye sinokuyicwangcisa ingqondo yakho engaphantsi ngokubeka iiankile.
I-master communicator (okanye ingcali ye-NLP) URobert Jensen naye uyasebenza kule ndlela.
Uyayibona kakhulu kubantu abanjengoJeroben Pauw. Unobugcisa obuninzi kwi-NLP kunye ne-hypnosis yencoko, kodwa amanani kunye namanani aqhuba kakuhle kakhulu.
Kungenxa yoko le nto uhlala ubenesimo sezulu esisekupheleni kwejenali. Emva koko uya kubona iinombolo kwaye uya kuphoswa kwaye ubuye kwimephu. Uya kongezwa kwimephu (ekhutshelweyo).
25 Matshi 2020 kwi-20: 58
Isiphelo samaza omkhuhlane!
25 Matshi 2020 kwi-23: 38
ke ukuba ndibona ngokuchanekileyo, emva kweeveki ezili-11 ngo-2020 sinesibalo esiphantsi sokufa kunokuba umgca usekwe?
26 Matshi 2020 kwi-07: 37
"Ufumana njani ukuba ndingumntu ochasayo uFreeland? Ndihlala kwikhaya elihambayo kwaye ndiza kukubonisa iakhawunti yam yebhanki. ” Kulungile Janet, ndibonise iakhawunti yakho yebhanki kwaye wandibonisa enye iakhawunti yebhanki.
"Ukuba bendifowunele nje, ngendiyilungisile"
Kwaye uluhlu olungena kwi-Inoffizieller Mitarbeiter (i-IMB'ers) lungena phantsi kwesithuba ngokuphathwa gadalala okuqhelekileyo ukutshisa i-Vrijland (njengoko bekwenza rhoqo kubhlog kunye nayo yonke imidiya yoluntu; ngumsebenzi wabo lowo).
Ewe uJanet uhlengahlengise iividiyo zakhe ngenxa yokugxekwa kwam. Ukuba "bendimbize nje", ngekhe athabathe iividiyo ezi-3 ezibanzi ze-An An zokuphanda ngaphandle kwe-intanethi kwaye zenze ezintsha zaza zalungisa ibali lakhe lonke. Ewe nguJanet, kunjalo? Kolder ngokuqinisekileyo. Iqwalaselwe kakuhle, ilungiselelwe kakuhle kwaye i-Q Anon inyuselwe ngexesha elifanelekileyo.
29 Matshi 2020 kwi-16: 04
Inombolo ye-akhawunti yebhanki kaMnumzana uJ. Ngaba ulunge kakhulu? NL33RABO03 ……… ..3 ikwimo yokugqibela. Ambalwa amanani aphuma ngasese, nangona eyikhuphe ngokwakhe. Kodwa yitsho.
« Ukuhlaziywa kwe-Coronavirus covid-19 ukuvala ukuvalwa: Xa uvuka kwaye uqaphela ukuba ubanjiwe, yintoni onokuyenza?
Usodolophu wase-Italiya usoyikisela ukuthumela amalangatye ukuba alwe ne-coronavirus »
Iindwendwe ezipheleleyo: 1.232.219
I-Coronavirus, Q Anon, iTrump, iBolsonaro, iBoJo, indawo enzulu kunye nokuvalwa kwe-intanethi ngo-Epreli 1?
Ngaba amadoda angatshatanga abalingane abona bantu kujolise kubo kwi-coronavirus? Isiseko sesayensi
Usodolophu wase-Italiya usoyikisela ukuthumela amalangatye ukuba alwe ne-coronavirus
Future op I-Trump, Q-Anon kunye 'nokucoca ubunzulu beentsomi' (Robert Jensen, Janet Ossebaard)
Future op I-Coronavirus, Q Anon, iTrump, iBolsonaro, iBoJo, indawo enzulu kunye nokuvalwa kwe-intanethi ngo-Epreli 1?
Riffian op I-Coronavirus, Q Anon, iTrump, iBolsonaro, iBoJo, indawo enzulu kunye nokuvalwa kwe-intanethi ngo-Epreli 1?
Lidiya Roosje op Ukuhlaziywa kwe-Coronavirus covid-19 ukuvala ukuvalwa: Xa uvuka kwaye uqaphela ukuba ubanjiwe, yintoni onokuyenza?
SandinG op I-Coronavirus, Q Anon, iTrump, iBolsonaro, iBoJo, indawo enzulu kunye nokuvalwa kwe-intanethi ngo-Epreli 1?